China UV Cutting Board Sterilizer Cabinet orinasa sy mpanamboatra | Meiling
MODELY MS-08 / MS-09
ara-nofo plastika, plastika
Naoty na herinaratra / hery / matetika 220V / 50W / 50HZ
asa famonoana otrikaina sy fanamorana
fahafahana 1 * tabilao fanapahana / 3 * tabilao fanapahana + 3 * antsy + 1 * hety + hazokely
Kitapo fanapahana izay nitazona 1-3pcs TPU manapaka
ankoatry Miaraka amin'ny mpandray rano
Lafiny roa Miaraka amin'ny hazavan'ny UV
ambany Mitsoka rivotra mafana 60 ℃
Haben'ny vokatra 400 * 110 * 265mm
Tady herinaratra 1,5 metatra
1. fantsona jiro UV-C roa no mahomby kokoa.
Jiro UV-C, 200-300nm. Fanamorana ny faritra lehibe. Ny taratra ultraviolet dia afaka manondraka ny sisin'ny masinina rehetra tsy misy zoro maty, mamono bakteria sy mikraoba mahazatra amin'ny fiainana.
2. 60 ℃ rivotra mafana fanamainana lakozia lakozia, tsy misy bakteria sy ny ahitra
Ny sikilety vortex any ambany dia mitarika ny fikorianan'ny rivotra amin'ny alàlan'ny vatan'ny PTC fanafanana izay mamorona rivotra mafana be dia be ho lasa masinina iray manontolo, afaka mahatratra ny vokatra maina sy ny bakteria.
3. Ny tahan'ny famonoana bakteria mahomby dia 99,99%
UV fantsona avo roa heny. Ny latabatra an-jaza koa dia azo antoka ampiasaina. Ny tahan'ny famonoana mahomby ny e.coil sy staphylococcus aureoles dia 99,99%.
4. Ny fitaovana isan-karazany dia azo apetraka ao an-trano
Mety amin'ny 98% mahery amin'ireo fitaovana fanapahana misy sakany sy hateviny samihafa eny an-tsena Antsy sakafo masaka, mihinana antsy manta, antsy voankazo. Salama sy tsy misy poizina.
5. Birao TPU kilasy sakafo, malefaka ary mety kokoa
Alaina ala-ala ny fanapahana legioma fahatsapana, tsara fanapahana tsy mafy, anti-bakteria sy ny voany fitaovana porofo, salama sy azo antoka, mahatohitra-mahatohitra.
6. Fomba fiasa efatra no ampiasain'ny zokiolona mora
Auto mode press the up button indray mandeha (60 minitra) ： UV Sterilization + maina.
7. Fomba fanamafisana, tsindrio ny bokotra miakatra indroa (90 minitra): UV Sterilization + maina
Ny maody UV dia tsindrio bokotra iray (30 minitra): Sterilization UV.
Tsindrio indroa amin'ny fanamainana fanamainana (60 minitra) ny lakile: maina.
Sterilizer amin'ny fitaovan'ny lakozia